#PodcastApple 8x22 dị ugbu a. Asịrị iPhone 8, MWC na ndị ọzọ | Esi m mac
#PodcastApple 8x22 dị ugbu a. Asịrị iPhone 8, MWC na ndị ọzọ
Otu izu ọzọ anyị chọrọ ịkọrọ gị niile pọdkastị nke anyị na-agbasa Kwa abalị - n'isi ụtụtụ - na Tuesday. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enweghị ike ịgbaso anyị bi ebe a anyị na-ahapụ vidiyo nke ọwa na YouTube yana njikọ nke pọdkastị n'onwe ya na ị nwere ike ige ntị na ọkpọ ọkpụkpọ ọkacha mmasị gị. Iji tụlee ihe gbasara ihe ndị ọrụ ibe anyị kwurịtara na Actualidad iPhone, anyị ga-ekwu na n'izu a anyị enweela asịrị dị mma. banyere ọdịnihu iPhone 8 ma ọ bụ "XNUMXth ncheta" mbipụta ya na ihuenyo OLED nwere ike ịnweta na ikuku na-akwụ ụgwọ, na mgbakwunye na ịmalite inwe brọsh nke mbụ nke ihe na-echere anyị na MWC na Barcelona na ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ nke ụwa Apple.
N'ebe a, anyị na-ahapụ vidiyo YouTube nke ị ga - ahụ anyị bi n'abalị ụnyaahụ ma ọ bụ chọọ anyị na ọkpụkpọ pọdkastị kachasị amasị gị ma denye aha:
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-erubeghị tụrụ ụtụ na ọwa iTunes echekwala ozo ma mee ya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ị nwekwara ike ime otu ihe ahụ na Onyonyo Youtube nke mere na ị nwetara ngosi oge anyị na-amalite ndụ na-egosi. I nwekwara ike iso anyị na netwọkụ mmekọrịta ma kesaa echiche gị, obi abụọ ma ọ bụ ntụnye n'oge ọ bụla, ndị otu PodcastApple na-anabata ha. Cheta na ị nwekwara ike iji hashtag #podcastapple na mgbakwunye na nke ọzọ nke ọwa, netwọk mmekọrịta na ndị ọzọ, site na nke ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » #PodcastApple 8x22 dị ugbu a. Asịrị iPhone 8, MWC na ndị ọzọ
Facebook kwadoro na ọ na-arụ ọrụ na ngwa maka Apple TV gbadoro anya na vidiyo
Onye Mmepụta nke Twitterrific maka iOS, na-ebupụta mkpọsa na Kickstarter iji mepụta ngwa maka MAC